Ny birao fitambaran-jiro mitafo vita amin'ny aliminioma dia tsy maintsy manana ny fahaizana mitahiry loharano sy mampihena ny vidiny
Ny birao fitambaran-jiro mitafo vita amin'ny aliminioma dia tsy maintsy manana ny fahaizana mitahiry loharano sy mampihena ny vidiny. Amin'ny ankapobeny, ny rindrina roa ary ny fanamainana iray (ny lamba roa ary ny fanamainana roa) na ny olana amin'ny kalitao, toy ny sisin-tany matotra, ny afovoan-tany afovoany, ny fantsona tsy hita, ny se lehibe ...
Fanangonana fahalalana amin'ny tabila plastika vita amin'ny plastika
Ny tontonana plastika aliminioma (fantatra koa amin'ny hoe plastika plastika vita amin'ny plastika) dia misy akora maro sosona. Ny sosona ambony sy ambany dia takelaka firaka alimina madio, ary ny eo afovoany dia birao fototra polyethylene (PE) tsy misy poizina. Sarimihetsika miaro no apetaka eo aloha. Ho an'ny outdo ...
Fampidirana fohifohy ny takelaka plastika aluminium
Ny takelaka plastika vita amin'ny aliminioma dia ny fanafohezana ny takelaka vita amin'ny plastika vita amin'ny aliminioma. Ny vokatra dia takelaka mitambatra misy sosona telo misy plastika toy ny sosona fototra sy fitaovana aliminioma amin'ny lafiny roa. Ny rakotra haingon-trano sy sarimihetsika miaro sy sarimihetsika dia mifono eo ambonin'ilay vokatra ho surfa haingon-trano ...